တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ပြန်တွေ့ပါပြီ(ရုပ်သံ) - Myitter
တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ပြန်တွေ့ပါပြီ(ရုပ်သံ)
4.8.2019 Update….ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ခုန်ချသွားသော ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား တွေ့ရှိဟု ကနဦးသတင်းရ..
2.8.2019 ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခုန်ချသွားသော စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကုန်းရွာနေ ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား …..
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း SERT မှ ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက်ဆက်လက်ရှာဖွေပေးလျက်ရှိရာ ပြန်လည်တွေ့ရှိကြောင်းကနဦး သိရပါတယ်ခင်ဗျာ….
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း SERT/ Ph-09779900100 / 09792119119
4.8.2019 တံတားပေါ်မှခုန်ချသွားသော ကနဦးသတင်း….
ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးခုန်ချမှုဖြစ်ပွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ စစ်ကိုင်း ခရိုင်/မြို့နယ်၊ SERT RESCUE ၊ သုခကာရီ RESCUE တို့ ရှာဖွေဆယ်ရေးပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ယခုအချိန်ထိရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးပါခင်ဗျ…..
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကုန်းရွာမှ ကိုပြည့်ဟိန်းထက် အသက် ၂၃ နှစ်ဟု သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူဟာ မြစ်ထဲခုန်မချခင်3နာရီအလိုမှာ နောက်ဆုံး Post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်. . နောက်ဆုံး Post မှာ “ကျွန်တော် က သေရမှာ သိပ်ကြောက်ခဲ့တာ…မင်းမရှိပဲ ရှင်သန်ရမှာကိုတော့ ပိုကြောက်တယ် 🙃” ဆိုပြီး တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီဘ၀တော့ ဒီမျှနဲ့ ဝေးပါစို့” တဲ့လားဗျာ. . .အချစ်အတွက်နဲ့ ဒီလိုလုပ်ရသလားဗျာ. . .ဘ၀မှာ အရေးကြီးတာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာ အစ်ကို မသိလေရော့သလားဗျာ. . .တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး…..
Source : အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း
4.8.2019 Update….ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စဈကိုငျးဘကျခွမျးမှ ခုနျခသြှားသော ကိုပွညျ့ဟိနျးထကျအား တှရှေိ့ဟု ကနဦးသတငျးရ..
2.8.2019 ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီခနျ့က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စဈကိုငျးဘကျခွမျးတှငျ ခုနျခသြှားသော စဈကိုငျးမွို့နယျ ကြောကျဆညျ ကုနျးရှာနေ ကိုပွညျ့ဟိနျးထကျအား …..
အရေးပျေါကယျဆယျရေးအဖှဲ့ စဈကျိုငျး SERT မှ ရပွေငျရှာဖှကေယျဆယျရေးအဖှဲ့ ဧရာဝတီမွဈကွောငျးတ
လြှောကျဆကျလကျရှာဖှပေေးလကျြရှိရာ ပွနျလညျတှရှေိ့ကွောငျးကနဦး သိရပါတယျခငျဗြာ….
အရေးပျေါကယျဆယျရေးအဖှဲ့ စဈကိုငျး SERT/ Ph-09779900100 / 09792119119
4.8.2019 တံတားပျေါမှခုနျခသြှားသော ကနဦးသတငျး….
ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စဈကိုငျးဘကျခွမျးတှငျ အမြိုးသားတဈဦးခုနျခမြှုဖွဈပှားသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမီးသတျတပျဖှဲ့ စဈကိုငျး ခရိုငျ/မွို့နယျ၊ SERT RESCUE ၊ သုခကာရီ RESCUE တို့ ရှာဖှဆေယျရေးပွုလုပျလကျြရှိရာ ယခုအခြိနျထိရှာဖှမေတှရှေိ့သေးပါခငျဗြ…..
စဈကိုငျးမွို့နယျ ကြောကျဆညျ ကုနျးရှာမှ ကိုပွညျ့ဟိနျးထကျ အသကျ ၂၃ နှဈဟု သိရှိရပါတယျခငျဗြာ။
သူဟာ မွဈထဲခုနျမခခြငျ3နာရီအလိုမှာ နောကျဆုံး Post တဈခုတငျခဲ့ပါတယျ. . နောကျဆုံး Post မှာ “ကြှနျတျော က သရေမှာ သိပျကွောကျခဲ့တာ…မငျးမရှိပဲ ရှငျသနျရမှာကိုတော့ ပိုကွောကျတယျ 🙃” ဆိုပွီး တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ…..
ဒီဘဝတော့ ဒီမြှနဲ့ ဝေးပါစို့” တဲ့လားဗြာ. . .အခဈြအတှကျနဲ့ ဒီလိုလုပျရသလားဗြာ. . .ဘဝမှာ အရေးကွီးတာတှေ အမြားကွီး ရှိနသေေးတယျ ဆိုတာ အဈကို မသိလရေော့သလားဗြာ. . .တကယျကို စိတျမကောငျးပါဘူး…..
Source : အရေးပျေါကယျဆယျရေးအဖှဲ့ စဈကိုငျး